Emaphakathi, ethule, eshibhile: konke okudingayo / LGTB - I-Airbnb
Emaphakathi, ethule, eshibhile: konke okudingayo / LGTB
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Stephan
U-Stephan Ungumbungazi ovelele
Noma ngabe uza e-Leipzig ukuzosebenza, ukuze uthole ukuqeqeshwa okuthuthukile noma njengesivakashi: Jabulela isikhathi sakho endaweni yami emaphakathi kodwa esendaweni ethule. Igumbi lihlangene, kodwa linikeza umbhede ophindwe kabili, itafula nezihlalo, iketela, itiye / ikhofi, izitsha / izitsha, ibhokisi elipholile, i-cloakroom enamahhuku amaningi nendawo yokugcina ephathekayo. Igumbi libheke igceke (eliluhlaza). Kufanelekile ukugibela izitebhisi ukuya esitezi sesi-4! Ngeshwa AKUKHO ukusetshenziswa kwekhishi okungenzeka!
I-LGBTQIA * inobungane
Igumbi lakho liminyene (cishe amamitha-skwele angu-11), kodwa linakho konke okudingayo ukuze uhlale uphumule e-Leipzig. Emizuzwini emi-5 usumaphakathi nedolobha, kodwa usekude ngokwanele nokuphithizela. Nginikeza ilineni lombhede namathawula kanye nejeli yokugeza kanye neshampoo. Ngeshwa, izivakashi zami NGEKE zisebenzise ikhishi !!!
CHOFOZA IZITHOMBE UKUZE UTHOLA ULWAZI OLUNINGI.
Igumbi lihlangene (11sqm) kodwa linikeza yonke into oyoyidinga ukuze uhlale unethezekile eLeipzig. Ungafika enkabeni yedolobha elidala ngaphansi kwamaminithi angu-5 (uhamba ngezinyawo). Ngihlinzeka ngezingubo zokulala, amashidi, amathawula, ishampoo nensipho. Ngeshwa izivakashi NGEKE zisebenzise ikhishi lami !!! UKUTHOLA ULWAZI OLUNINGI CHOFOZA IZITHOMBE.
Amathilomu, amabhikawozi, izindawo zokudlela, ama-pubs athokomele, isuphamakethe - uzothola ukukhethwa okukhulu kwakho konke lokhu endaweni eseduze. Isikhungo sedolobha siqhele ngamamitha angu-500 futhi ungaba se-Johannapark enhle ngemizuzu emi-2. Ukuhambahamba, ukubona indawo, ukuyothenga, ukuhamba ngezinyawo, ukuphuza ikhofi, ukujabulela izindawo zokudlela zamazwe ngamazwe: konke lokhu kuqhelelene nje negumbi lakho.
Ngibheke ngabomvu izingxoxo ezimnandi nezivakashi zami, nginikeze amathiphu e-Leipzig, kodwa hlonipha ubumfihlo bakho. Uma unemibuzo, ngingaphinde ngitholakale ngomakhalekhukhwini futhi ngizohlala ngiphendula ngokushesha okukhulu.
Kubani okubalulekile: Ngigonyelwa i-Covid kathathu.
Ngibheke ngabomvu ukuhlangana nawe. Uma unesikhathi sokuxoxa, wamukelekile njalo ukuthi ungqongqoze emnyango wegumbi lami lokuphumula!
Ngigonyelwe i-Covid kathathu.
Ngibheke ngabomvu izingxoxo ezimnandi nezivakashi zami, nginikeze amathiphu e-Leipzig, kodwa hlonipha ubumfihlo bakho. Uma unemibuzo, ngingaphinde ngitholakale ngomakhalekhukhwini…
UStephan Ungumbungazi ovelele